IDelta ityhila indawo entsha ezinikeleyo yeTSA Precheck, ibhegi eyehla
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IDelta ityhila indawo entsha ezinikeleyo yeTSA Precheck, ibhegi eyehla
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Oktobha 27, 2021
I-Delta ityhila indawo entsha ezinikeleyo ye-TSA Precheck, ibhegi eyehla.
Amava amatsha okwaziwa kobuso e-Atlanta ibonelela ngezandla- kunye nesixhobo esingena lula kubahambi ukusuka kwisango ukuya kwisango.
Ukuhamba ngeHartsfield-Jackson Atlanta Airport International kuya kuba lula ngakumbi kubathengi beDelta ababhalise kwiTSA PreCheck ukuqala kwinyanga ezayo.
I-Delta Air Lines ivula indawo yokuqala ye-Delta-TSA PreCheck yokubonisa indawo yokungena kunye nokuwisa ingxowa.
Abathengi abane-app ye-Fly Delta kunye nobulungu be-TSA PreCheck kungekudala baya kuba nakho ukutyelela indawo entsha yokulahla ibhegi kwinqanaba elisezantsi le-Atlanta's Domestic South Terminal.
Delta Air Lines ibhengeze ukuba ukuqala kwinyanga ezayo, ukuhamba nge Hartsfield-Jackson Atlanta Airpo Internationalrt kuya kuba lula ngakumbi kubathengi Delta ababhalise TSA PreCheck, kunye nokwandiswa kwezakhono ukuqondwa kobuso obutsha kunye nokuvulwa lokuqala ngqa Delta-TSA PreCheck express lobby kunye bag drop.
Abathengi abane-app ye-Fly Delta kunye nobulungu be-TSA PreCheck kungekudala baya kuba nakho ukutyelela indawo entsha ezinikeleyo yokulahla ibhegi kwinqanaba elisezantsi le-Atlanta's Domestic South Terminal, badlule kwindawo yokuhlola yokhuseleko, kwaye bakhwele inqwelomoya yabo esangweni besebenzisa inqwelomoya yabo kuphela. “iID yedijithali” (eyenziwe ngenombolo yomthengi yeLungu le-SkyMiles, inombolo yokundwendwela kunye neNombolo yoMhambi eyaziwayo). Abathengi bakhululekile ukuhamba ukusuka kwi-curb ukuya kwisango, izandla ngokupheleleyo kunye nesixhobo-free.
“Sifuna ukunika abathengi bethu ixesha elongezelelekileyo lokonwabela uhambo ngokuvula amava alula, angenamthungo nasebenzayo ukusuka ekupheleni ukuya ekupheleni,” utshilo u-Byron Merritt, uSekela Mongameli weDelta kuYilo lwamava eBrand. “Delta Air Lines ibe yinkokeli ekuvavanyeni nasekuphumezeni itekhnoloji yokuqaphela ubuso ukusukela ngo-2018 njengenxalenye yombono wethu wokwakha izikhululo zeenqwelo moya ezingenamsebenzi. Ukuphehlelelwa kwe AtlantaIndawo yokwamkela iindwendwe kunye nokuwisa ibhegi linyathelo lamva nje ekuzibopheleleni kwethu ekuphulaphuleni nasekuveliseni izinto ezintsha kubathengi bethu.”
Nantsi indlela amava amatsha eDelta azakuyenza lula ngayo indlela yokuhamba ngeendlela ezintathu zokucofa kwisikhululo seenqwelomoya eAtlanta: